Madaxda Soomaaliyeed |
Madaxda Soomaalida waxey xeeladoodu ka gudbi la’ dahay adeegsiga kaalmada shisheeyaha lagu tuugsanayo oo inta badan ay maamulka xoolahaas ka dhalato khilaafkooda xoogan. Haddii la raaco meelaha ay ku dambeeyeen lacagahaas waxaa loogu tegayaa khilaafka ka dhashay oo si xirfadeysan loogu soo qurxiyey qaab siyaasadeed ama beeleed si marmarsiyo ay ugu helaan in khilaafkoodu ku saleysan yahay ismaandhaaf salka ku haya kala fikir duwanaasho, taas oo ah mid aan sal iyo raad toona lahayn. Waxaa kuu muuqanaya in raisulwasaaraha uu muujinayo inuu ka careysan yahay amardiidada uu kala kulmayo madaxweynaha oo uu kala horimaanayo hawlaha lagu maamulayo xukuumadda, taas oo ah midaan sax ahayn waayo cida loo baahan yahay inuu amarka madaxweynaha qaato waa raisulwasaaraha oo horay dhaar hoose ula galay inuu kooxda madaxtooyada keentay u shaqeeyo, lana shaqeysto. Inkastoo madaxweynaha hogaamintiisu ay aad u liidato haddana isaga ayaa doorasho ku yimid kursiga madaxweynenimada, isaga ayaana ka masuula oo uu xil ka saaran yahay hogaaminta dalka, wuxuuna xaq waajiba ugu leeyahay xubnaha ka tirsan xukuumadiisa in amaradiisa ay u hogaansamaan oo sida waafaqsan talooyinkiisa loo raaco siyaasadiisa uu dalka ku hogaaminayo. Waa qalad in xubnaha ka tirsan xukuumada ay qeybna noqoto mucaarid, qeybta kalana ay u muuqato muxaafid. Waxaa haboon haddii raisulwasaaruhu uusan ku shaqeyneyn meelmarinta siyaasada madaxweynaha inuusan isku daalin isqabqabsi la iskugu cagajugleynayo awood dowladnimo oo uusan midkoodna istaahilin, taas oo ku dhamaata in si aan niyad ahayn gacamaha la isugu geliyo dabadeedna qalbigooda oo isnacsana la kala fogeeyo oo mid walba qiil loogu helo inuu xilka iska dhigo. Raisulwasaaraha waxaa la gudboon inuu xilka iska casilo mar haddii ay wadashaqeyn waayeen ama uu ka waayey madaxweynaha kalsoonidii uu ku soo xushay si uu madaxbanaani ugu maamulo xukuumadda. Wadamada caalamka waxaa doorasho ku yimaada ama madaxweynaha ama rasiilwasaarha, kan ku soo guuleysta doorashadaas ayaa amarkiisa lagu qasban yahay in la raaco, isaga ayaana iska leh awooda siyaasadeed ee lagu hogaaminayo xukuumada, mana dhacdo inuu ka dhexshaqeeyo xukuumadiisa cid aan amarkiisa qaadaneyn. Ma dhici karto kala maanduwanaasho ka dhex imaan karta xukuumada dhexdeeda waayo waxaa lagu shaqeynayaa oo keliya waa fulinta amarada iyo siyaasada madaxweynaha, cidii aan sidaas ku qanacsaneyna waxaa u furan iney si xushmad leh xilka uga tagto. Waxaa dhab ah in hogaanxumida ka jirta dhinaca xukuumada uu masuul ka yahay madaxweynaha waayo dhaliisha loo soo jeedinayo xukuumada isaga ayey dushsa ka aaran tahay, mana jirto cid la wadaageysa eedahaas, taasna waxey ka turjumeysa inuu yahay masuul ku fashilmay gudashada waajibaadka uu u xilsaaran yahay oo ah dalka inuu ku hogaamiyo xukuumad leh maamul siyaasadeed oo mideysan. Ma jirto wax ka hortaagan madaxweynaha oo aan ka ahayn kartixumadiisa inuu soo xusho raisulwasaare ay xulafo hoose isaga yihiin fikirka siyaasada waayo isaga ayaa xaq u leh inuu soo xusho cida uu rumeysan yahay iney kalsooni buuxda kula shaqeyn karto isagoon ku saleyn xulashadiisa habqeybsiga ku dhisan beelnimada.
saciidciise258@aol.com Silvitra tab no rx, buy Zoloft online.